Vita amin'ny varahina vita amin'ny barìka vita amin'ny barika vita amin'ny jiro sy ny mpanofa - China Factory - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Fananganana fananganana fanorenana > Nail amin'ny foza vita amin'ny barazy
Ny sokajy avy amin'ny tarika Galvanized Concrete, izahay dia mpanamboatra orinasa avy any Shina, hailay amin'ny Steel Nail, ny hail'ny hailsed Concrete Nails, ny vokatra avo lenta avoakan'ny Galvanized Concrete Nail sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasa!
Product Introduction of Nails made of galvanized steel
Ny hodi-kazo vita amin'ny bobongolo no manondro ny hombo voafantina mahazatra indrindra. Vita amin'ny kalesy ambony kalitao, zinc plated. Ny hodi-kazo vita amin'ny bobongolo vita amin'ny bobongolo dia manana kofehy malefaka sy kapa manodidina. Amin'ny ankapobeny isika dia manamboatra fantsika lavalava vita amin'ny galvanised tsy misy loha, paosin-kisendra vita amin'ny bozaka vita amin'ny lava-pifanekena sy kofehy malefaka. Azonao atao ihany koa ny mifidy ny vy, ny vy ary ny vy. Tahaka ny avy amin'ny samihafa maimaim-poana, nomena karama. Ny fantsika hodi-kazo misy kofehy maromaro dia manome fanamafisana tsara sy hery tsara. Miaraka amin'ny kapoakan'ny fihodinana ary ny Shanke. Miaraka amin'ny fitaovana manokana, ny fantsika ny kodiarana dia ny fantsika fantsika manokana raha oharina amin'ny fantsika tsotra. Mafy kokoa izany, ny fehiloha dia fohy ary matevina matetika ary manana fepetra tsara sy famahana hery. Amin'ny alalan'ireny endri-javatra ireny, ny fantsika fantsika dia manamboatra fantsika sy fanaka tsara ho an'ny toerana mafy orina.
Product Parameter ny fantsika miloko vy
Avy 25mm (1 inch) mankany 152mm (6 inches)
Kitapo misy boribory lava na rihitra lava
Manaiky baiko madinika izahay
Karbonina vy, vy tsy misy tanany, vy ary ny sisa
Fananganana fanorenana, sehatry ny fanorenana, sehatra bisikileta, trano hazo, fitaovana elektrika, trano sy ny sisa
Electro galvanisée, mafana volo volo na mainty
Volom-bolo (25kgs / baskety) na kitapo kely (misy na tsy marika) na mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpividy
Ny endriky ny fitaovana sy ny fampiasana ny paosin-dabozo vita amin'ny vy
Kapioka matevina, boribory boribory, diamondra teboka, tselatra mamirapiratra, porofo mahery vaika
Fampiasana:fananganana fanorenana, saha fanorenana, ampahany bisikileta, trano hazo, singa elektrika, trano sy ny sisa
Ny famolavolana fanoratana:Ny vokatra vita amin'ny vokatra - ny fananganana fantsika - fanalàna polisy - fanangonana siramamy sy fitsaboana amin'ny arakaraky ny fangatahana vokatra - manamarina ny fako, manangona fiara
Ny fantsika vita amin'ny varahina hodi-jiro vita amin'ny hodi-jiro dia nampiasaina amin'ny fomba fanorenana ankapobeny, ary ny karazana fantsika dia ampiasa ny fanorenana baoritra sasany. Ireo fantsika dia manana kofehy matevina ary vita amin'ny vy. Ny fonon-koditra dia manana loha midadasika misy loko marevaka na teboka ary manana diamondra maranitra maranitra. Amin'ny fampiharana sasantsasany dia misy dikany ny fanesorana ny tendron'ny fantsika mba hisorohana ny famaranana hazo.
Ny antsipirihan'ny vokatra momba ny hodi-jiro vita amin'ny vy
1) 20,25Kg / carton / 50Kg / Gunny Bag
2) 16boxes / hazo trondro
3) 1Pj / Box, 16boxes / CTN
Vola be dia be amin'ny kitapo, kitapo kitapo na kitapo hessian, na amin'ny boaty anatiny araka izay takinao.
Fandefasana:Amin'ny ranomasina, amin'ny rivotra na amin'ny tolotrasa maneho hevitra
Hot Tags: Ny fantsom-barotra vita amin'ny baranjely, China, mpamokatra, mpamatsy, orinasa, vita avy any Shina, mividy, mividy, maimaim-poana, an-tapitrisany, volombava, vidin'ny vidin-tsolika, kisarisary, avo lenta
Vita amin'ny vy